Ogaden News Agency (ONA) – Machadka SIDRA oo soo Bandhigay Daraasad ku saabsan in Dalka Soomaliya Doorasho ka dhici Karto 2016 +Sawiro
Machadka SIDRA oo soo Bandhigay Daraasad ku saabsan in Dalka Soomaliya Doorasho ka dhici Karto 2016 +Sawiro
Machadka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SIDRA ayaa maanta oo Arbaco ah magalada Garowe kusoo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen In doorasho Soomaaliya ka dhici karto iyo in kale.
Munaasibadda soo bandhigga cilmi baaristan ayaa waxaa goobjoog u ahaa madaxwayne ku xigeenka dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin Cabdilaahi Camay, wasiiro iyo masuuliyiin kale.
Agaasimaha SIDRA oo soo noqday wasiirka Deegaanka Mudane Guuleed Saalax Barre ayaa ka waramay ahmiyadda ay cilmi baaristan ku fadhido, wuxuna sheegay inay aragti kasoo aruuriyeen dad ku kala nool magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo, Muqdisho , Baydhabo iyo Kismaayo.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Camay ayaa soo dhaweeyay aragtidan ay soo aruurisay Machadka SIRDA kaasoo salka ku haya dadku siday u arkaan in doorasho ay qabsoomi karto 2016 iyo in kale, dadkii aragtidaasi la waydiiyay ayaa isku raacay badankooda inay muhiim tahay in doorasho dhacdo xiligii loogu talo galay.
Hoos ka akhriso war-saxaafadeed ay cilmi baaristan kasoo saartay Machadka SIDRA.
Warsaxaafadeed ku Saabsan soo Bandhigista Cilmi Baaris Lagu Sameeyay Qaabka ugu Haboon oo ay Doorasho uga Dhici Karto Soomaaliya 2016:
Arbaco, 25 November 2015
Ka dib markii ay Dawladda Federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday bishii July 2015 in aysan suurtogal ahayn in waddanka laga qabto doorasho hal-qof hal-cod ah 2016 sidii horay u qorshaysnayd, waxaa aad usoo ifbaxay in uu jiro jahawareer iyo kala aragti duwaansho dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan in doorasho ay dhici karto 2016 iyo qaabka ay ku dhici karto haddiiba la qabto.
Machadka Horumarinta iyo Falanqaynta Cilmi Baarista Soomaaliya ee SIDRA wuxuu diraaso ka sameeyay 5 magaalo oo Soomaaliya ka mid ah oo kala ah Baydhabo, Kismaayo, Mogadishu, Gaalkacyo iyo Garoowe si loo ogaado dadka Soomaaliyeed waxa ay ka aaminsanyihiin qabsoomidda doorasho 2016 iyo qaabka ugu haboon ee ay ku dhici karto.
Isugayn waxaa la waraystay dad gaaraya 290 oo ka kala socda qaybaha kala duwan sida Xubno ka socda Maamuladda, Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Ururada Bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada. Magaalo walba waxaa lagu qabanayay kulan dood-wadaag ah oo looga doodayay su’aalo khuseeya mawduuca. Waxaan noo suurogalin inaan tagno oo aan ka samayno diraasadaan magaaladda Baladweyne oo horay noogu qorsheysnayd duruufo jira awgeed. Diraasaddaan waxaa la qabtay bilihii October iyo November 2015.
Waxyaalaha kasoo Baxay Diraasadda:
1. Dadkii la waraystay waxay sheegeen intooda badan (91%) in aysan suurtogal ahayn in la qabto doorasho hal-qof hal-cod ah 2016.
2. Sidoo kale, maadama aysan suuroobayn doorasho hal-qof hal-cod ah, dadkii la waraystay waxay intooda badan (93%) qabaan in ay tahay in la qabto doorasho hab kale loo marayo, halka dad kooban (7%) ay qabaan in dowladda hadda jirta wakhtiga loo kordhiyo si hawlaha horyaala ay u dhammaystirto waddankana u gaarsiiso doorasho hal-qof hal-cod ah.
3. Dadka qaba in doorasho la qabto, waxay soo jeediyeen in inta aan doorashada la gaarin la sameeyo: wacyi galin doorasho (41%), maxkamad dastuuri ah (23%), hannaan lagu xaliyo khilaafaadka doorsahada (21) iyo xisbiyo qaran (9%).
4. Inta badan dadkii la waraystay (79%) waxa ay qabaan in qaabkii loo maray soo xulista baarlamaanka sannadkii 2012 aan dib loogu laaban, taas oo ahayd in odayaal dhaqameedku kaligood soo xulayeen xubnaha baarlamaanka.
5. Waxaa aad loogu kala aragti duwanaa qaabka ugu habboon ee lagu salaynayo soo xulista baarlamaanka. Dadkii laga waraystay 5taas magaalo waxay aad ugu kala jabeen badankood 2 qaab: (1) in Hab Ergo Deegaan lagu saleeyo, iyo (2) in Hab Ergo Qabiil lagu saleeyo. Waxaa kale oo jirta qayb kale oo aaminsan in hannaan xisbiyo qaran lagu saleeyo. Baydhabo: 93% waxay qabaan in qaab ergo beeleed lagu saleeyo. Kismaayo: 85% waxay qabaan in qaab ergo deegaan lagu saleeyo. Mogadisho: 69% waxay qabaan in qaab ergo qabiil lagu saleeyo halka 21% ay qabaan in qaab xisbiyo ah lagu saleeyo. Garoowe: 89% waxay qabaan qaab ergo deegaan in lagu saleeyo halka 10% ay qabaan in qaab ergo dawlad-goboleed lagu saleeyo. Gaalkacyo (qaybta Galmudug): 53% waxay qabaan in dowladda hadda jirta wakhti loogu daro, inta aaminsan in doorasho la qabto 51% waxay qabaan in qaab xisbiyo ah lagu saleeyo halka 49% ay qabaan in qaab ergo qabiil lagu saleeyo.
6. Waxyaalaha keena isqabqabsiga madaxda saree e dawladda Federaalka ah ayay ku macneeyeen dadkii la waraystay inay sababto (1) dastuurka oo aan si cad u kala qeexayn awoodaha (27%), (2) maxkamad dastuuri ah oo aan jirin (21%), (3) xisbiyo qaran oo aan jirin (4) dano shaqsiyadeed (18%) iyo (5) maqnaashaha aqalka saree e Baarlamaanka (9%).
Talobixin ku soota Dawladda Federaalka ah iyo Dawladaha Xubnaha ka ah:
1. Doorashada 2016 waa inay ku dhacdaa hannaan isu keenaya aragtiyada kala duwan ee ka jira qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Hannaankaasi wuxuu noqon karaa in hab isku dhaf ah lagu soo xulo ergada (deegaan iyo qabiil) dooranaysa xubnaha baarlamaanka, si marxaladaan xassaasiga ah looga gudbo is afgarad iyo isqancin.
2. Meelaha aysan maamul ka jirin inay Dawladda Federaalka ah iyo odayaal dhaqameedku iska kaashadaan soo xulista ergada dooranaysa xubnaha baarlamaanka.
3. Dawladda Federaalka iyo Dawladaha Xubnaha ka ah waa in ay isku raacaan wadada loo marayo (road map) dhammaystirka hawlaha harsan inta doorashada 2016 laga gaarayo.
4. Wacyi galin badan oo arrimaha doorashada ku saabsan waa in laga qabtaa dhamaan gobolada Soomaaliya.
Xilliga fog (2016 ka dib):
5. Waa in Guddi Qaran oo Doorashooyinka oo la isku raacsanyahay la dardar galiyo hawlihiisa shuruucda uu u baahanyahayna la dhamaystiro.
6. Maxkamaddii dastuuriga ahayd in la dhiso
7. Waa in la dhamaystiro dastuurka kumeel gaarka ah, loona qaado afti dadweyne
8. Tiro koob waa in la sameeyaa lana hirgaliyaa hannaanka xisbayada badan
Talobixin ku socota Beesha Caalamka:
1. Deeq bixiyayaasha beesha caalamku waa inay sameeyaan xafiis taageero (Support Unit) oo qaabilsan doorashada 2016.
2. Heerka dawladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa in sidoo kale uu jiraa xafiis qaabilsan taageerista arrimaha doorashooyinka 2016.
Waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan dadkii soomaaliyeed ee ka qaybqaatay xog ururintaan machadka SIDRA uu ka qabtay 5taas magaalo. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamuladda ka jira deeganadaas oo noo fududeeyay inaan si habsami leh u qabanno cilmi baaristaan.